मृत्यु पश्चात पनी गुगल एकाउण्ट प्रयोग गर्ने हैन ? | मेरो कलम
मृत्यु पश्चात पनी गुगल एकाउण्ट प्रयोग गर्ने हैन ?
Nepali May 19, 2013
– अनौठो लाग्न सक्छ ‘मृत्यु पश्चात कसरी गुगल एकाउण्ट प्रयोग गर्ने ?’ स्वर्ग वा नर्क कतातिर हुईने हो, फेरी त्यता कम्प्युटर,ईन्टरनेट हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्न त थाल्नु भएननी ? आफु स्वयमं मरिसकेपछि गुगल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजिएको होईन । मृत्यु पश्चात पनी आफ्ना आफन्तलाई आफ्नो गुगल एकाउण्टमा रहेका अनलाईन सम्पती सुम्पन सकिन्छ चै भन्न खोजिएको हो ।
आफुले प्रयोग गर्दै आएका धेरै गुगल एकाउण्टका फिरचहरु आफन्तलाई सुम्पन मिल्ने सुविधा गुगलले दिदै आएको छ । फेरी पनी लाग्न सक्छ युजर आईडी र पासवर्ड दिएपछि त एकाउण्ट साईन अप गर्न मिली हाल्छ नी । त्यो पनी हो तर आफ्नै नाम, ठेगानामा त्यो मर्ने वा मरिसकेको व्यक्तिको सम्पती त प्रयोग गर्न सक्दैननी । आफ्नै नाममा नामसारी गर्नको लागी यो सुविधाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसको लागी ईन एक्टिभ एकाउण्ट म्यानेजरमा जानुपर्ने हुन्छ ।
लामो समय गुगलको उत्पादन गर्दै गर्दा धेरै नै महत्वपुर्ण सामाग्रीहरु ईन्टरनेटमा सेभ भएका हुन्छन् । हालै गुगलले जिमेलवाट पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सुविधा पनी ल्याईसकेको छ । यस्ता सम्पतीहरु आफ्ना आफन्तको लागी हस्तान्तरण गरेर मर्नु, मर्दै गरेको व्यक्तिको दायित्व पनी हो ।
यो सुविधा प्रयोग गर्नको लागी Inactive Account Manager मा क्लिक गर्नुस् । Inactive Account Manager पेज खुलिसकेपछि Setup मा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला ।
Dont miss : ‘मरेका मान्छेको आत्मासगँ कुरा गर्ने प्रविधि आउदैछ’
आफ्नो गुगलमा रहेका महत्वपुर्ण डाटा एवं फिरचहरु कसको नाममा हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? सो व्यक्तिको फोन नम्वर राख्नुपर्ने हुन्छ , कति समयपछि गुगल एकाउण्टमा रहेको सम्पती हस्तान्तरण हवस् ? के चाहनुहुन्छ ३ महिनादेखी १८ महिनासम्मको समय अवधी छनोट गर्न सकिन्छ । १० जना सम्म आफन्तलाई आफ्नो गुगलको डाटा सेयर गर्न सक्ने सुविधा रहेको पनी देख्न सक्नुहुन्छ । हैन म ‘मरेपछि डुमै राजा’ भन्ने सोच वनाउनुभएको छ भने पनी तपाईले डिलिज अप्सन देख्नुहुन्छ । सेट गरिएको समय अवधिमा आफ्नो गुगल एकाउण्ट स्वत: डिलिट हुने गुगलले जनाएको छ ।
~ यो पोष्ट Pokharatech.com वाट प्रभावित छ ।
टाइप गरेर मात्र हैन अब हेरेरैं ट्रान्सलेट
Nepali August 4, 2015
Dinesh Dangi May 19, 2013 Log in to Reply
के नेटवर्क साइड मा पनि यस्ता अमानवीय सब्द उप्युग गर्न पाइन्छ ,के हो जवानमा लगाम भनेको के होला ?
Shanti Bikram Gautam May 19, 2013 Log in to Reply
कहाँ भनेको छ र जवानमा लगाम ? अन्तै पढेर कमेन्ट चै यता परोकि ? 🙂
बडा गजब को कुरो छ त गाँठे !
यहाँ पनि क्लिक गरम है बिभिन्न टिप्स को लागी
>> कसरी WIFI ह्याक गर्ने ? कसरी ब्लग लाइ राम्रो बनाउने ? अनलाइन बाट पैसा कसरी कमाउने ? क्लिक गरीहल्नुहोस